China bag engangenwa imveliso kunye Factory | Jiashun
Izinto zelaphu ezisetyenzisiweyo kwingxowa yokukhusela ibhetri engacimi umlilo yirabha yesilic, ilaphu leglasi yefayibha, ifilimu yealuminiyam, njl.
Ukungenwa ngumlilo kunye nokungangenwa kwamanzi-okwenziwe nge-silicone edibeneyo yeglasi yefayili yegobolondo yelinen kunye ne-aluminium yefayili yangaphakathi, inokumelana nokufikelela kwi-1000 ° C (malunga ne-1832 ° F) Ukuze ugcine zonke izinto zakho ezixabisekileyo zikhuselekile.
Ukungenwa ngumlilo kunye nokungangenwa kwamanzi-okwenziwe nge-silicone edibeneyo yeglasi yefayili yegobolondo yelinen kunye ne-aluminium yefayili yangaphakathi, inokumelana nokufikelela kwi-1000 ° C (malunga ne-1832 ° F) Ukuze ugcine zonke izinto zakho ezixabisekileyo zikhuselekile. Ukufudumeza ubushushu kunye nokumelana neqondo lobushushu eliphezulu- kwaye ubonelele ngelaphu elomeleleyo lobushushu kumaqondo obushushu ahlukeneyo, anje ngelaphu i-vermiculite, ilaphu le-silica ephezulu, ucingo lwentsimbi oluqiniswe ngentsimbi olomeleziweyo ilaphu lefayibha yeglasi, njl. Itekhnoloji yokuluka ingqongqo kwaye ivuthiwe, kwaye ineminyaka emininzi yamava atyebileyo kwitekhnoloji yokutyabeka, enokuqinisekisa ukumelana nokunxiba okuphezulu kunye nobomi benkonzo ende yelaphu elingenamlilo.
Isetyenziselwa iibhegi zokukhusela umlilo kunye nobushushu beebhili, iibhondi, izatifikethi, imali, imali, amaxwebhu abalulekileyo, izinto zexabiso, iibhetri ze-lithium, njl.
[UMGAQO WOKUQHUBA NAMANZI - UKhuselo kuyo yonke imiqathango]:Nge-FIBERGLASS ekabili-ebekiweyo, iNgxowa yethu yeMali engacimi umlilo inokumelana namaqondo obushushu aphezulu njenge-2000 F ngamaxesha athile (UL94 VTM-0). Okwangoku, i-SILICONE camera camera + + HOOK & LOOP CLOSURE izisa ukhuseleko olukhulu lwamanzi. Isikhwama sethu esingenamlilo sinokuphila emlilweni kwaye senze ukuthembeka kuzo zonke iimeko zemozulu. Ilungele ikhaya, iofisi, uhambo, kunye NOKUZILUNGISELELA NGOKUNGXAMISEKILEYO, njengesaqhwithi semvula, inkanyamba kunye nenyikima.
[UBungakanani obugqibeleleyo bobukhulu obuxabisekileyo - Ipasipoti, iSatifikethi, ikheshi, amaqhosha kunye nobucwebe]:Ngaba unamaxabiso amancinci amancinci amancinci? Awazi ukuba ungawabeka njani ngokugqibeleleyo? kwaye ubungakanani bunokwenziwa ngokwezifiso, iiNgxowa zeWallet ezingacimi umlilo zenzelwe ngokukodwa ukugcina ipasipoti yakho, imali, iileta, iifoto ezixabisekileyo, isatifikethi, ubucwebe, izitshixo, amakhadi nokunye. Ngoyilo oluthwalekayo, siyathemba ukuba ungagcina ZONKE izinto zakho ezibalulekileyo zilungiswe kakuhle kwaye zikhuselwe nangaliphi na ixesha naphi na.
[UKUNGASI-ITCHY SILICONE COATING-Kulula kakhulu ukuSebenzisa iKhaya kunye neOfisi]:Iingxowa zethu zemali ezingatshiyo zitywinwe ngobuchwephesha obuphezulu KWI-SILICONE engeyo-ITCHY kwilaphu le-fiberglass.Oko kuthetha ukuba, awudingi iiglavu ukuze ufumane izinto zakho zexabiso ngaphakathi nangaphandle. Le ngxowa yeMali ingacimi mlilo kulula kakhulu ukuyiphatha ngeenxa zonke, ngehambo yeshishini, iofisi, ukusetyenziswa kwekhaya, njlnjl. Nge-25% LOKUKHULU KUNYE NOKUVALWA KOKUVALWA, iiNgxowa zethu zeMali ezingacimiyo zinika ukhuseleko olukhulu lwezinto ezixabisekileyo kunezinye nokuba ungaphi kwaye phi Yisebenzise.
[IINGXOWA ZOKUGQIBELA ZOKUGQIBELA ZOKUGQIBELA JUMBO-IMveliso eziHloniphekileyo]:Singabantu abanobuchule bokubonelela ngeengxowa ze-TOP CLASS Fireproof kwimarike. Ezinye iimveliso zethu zobungakanani beJUMBO zizuze IGAMA ELIKHULU lokukhusela izinto ezinkulu ezixabisekileyo zabathengi. Ngoku, ezi zi-2 ziPhathekayo zeMali ezingakhuselekanga zemali kukukhusela izinto zakho ezinesayizi esincinci, zilungele iJUMBO FIREPROOF BAGS zethu ngokugqibeleleyo, kwaye zibonelela ngokhuseleko olugqibeleleyo KUNYE kwimarike.
[IIMPAWU ZOBUNGQINA OBULUNGILEYO NOMLILO OQHUBEKILEYO]:Ngawo onke amaXabiso oMgangatho oPhezulu oMabini oMaleko weFibreglass, Izinto ezingafunekiyo ezingadibanisi iiSilicone, Ukuqina okuLinganisiweyo kunye nokuValwa kweLoop, iingxowa zethu zemali ezingacimiyo zomelele ngokwaneleyo, kwaye zilungele ukusetyenziswa kwakho kwemihla ngemihla kunye nongxamiseko. Nceda uqaphele ukuba sicebisa ukuba sigcine iibhegi zethu zokucima umlilo kwibhokisi ekhuselekileyo emlilweni ukuze sikhuseleke ngakumbi.
Egqithileyo Isambatho sokuvala
Okulandelayo: Ukhuko olungangenwa